Dad baabuur lagu laayay Mareykanak | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dad baabuur lagu laayay Mareykanak
Dad baabuur lagu laayay Mareykanak
New yorka(SONNA) Wararka ka imaanaya magaalada New yorka ee Dalka Mareykanka ayaa sheegaya in Ugu yaraan siddeed qof ay ku dhimatay magaaladaasi 11 kalena dhaawac halisa uu soo gaaray ka dib markii nin baabuur nooca xamuulka ah wada uu dad ku jiirsiiyay meel ay maraan dadka baaskiillada wata ee wado ku taalla xaafadda Lower Manhattan.
Waxaa la sheegay in Ninka baabuurka waday ay da’adiisu ahayd 29 jir oo markii uu dadka jiiray ka degay gaariga, waxaana toogasho ku dhaawacay askari boolis ah kadibna laxiray sida ays heegayaan saraakiisha ammaanka.
Xog uu helay telefishanka CBS ayaa lagu sheegay in qoraal baabuurka uu ninkaasi waday laga helay ay muujinayso in uu xiriir la lahaa Daacish.
Eedaysanaha oo sida muuqata deganaa gobolka Florida ayaa la sheegay in isbitaal loo qaaday si dhaawaciisa loo dabiibo,waxaana Duqa magaalada New York, Bill de Blasio, uu yiri “wuxu ahaa fal argagixiso oo fulaynimo ah oo lala beegsaday rayid aan waxba galabsan”.
“waanu ognahay in falka looga gollahaa in la nagu niyad jabiyo laakiin waxa kale oo aan ognahay in dadka ree New York ay yihiin dad adag, weligayo fal colaadeed oo looga dan leeyahay in lanagu cabsi geliyo u liici mayno”Ayuu intasi ku daray.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna fariin uu bogiisa Twitter-ka ku qoray waxa uu ku sheegay sidan” waxaan tacsi iyo duco ba u dirayaa dadka ku waxyeelloobay iyo qoysaska dadkoodii ku waayey falka argagixiso ee ka dhacay magaalada New York.
Previous articleShirka wadatashiga W/Warfaafinta JFS,Maamul Goboleedyada iyo Warbahinta gaarka ah oo maalintii labaad galay
Next articleShirka wadatashiga W/Warfaafinta JFS,Maamul Goboleedyada iyo Warbahinta gaarka ah oo maalintii labaad galay